Thenga i-J147 powder (1146963-51-0) Abavelisi kunye neFektri
I-J-147 powder sisiyobisi esitsha solingo esenziwa njengonyango olunokwenzeka kwisifo se-Alzheimer's. Ukuza kuthi ga ngoku, iimvavanyo ezenziwe kwiimpuku zibonisa isithembiso esikhulu. I-J147 ixele iziphumo ekubuyiselweni kweziphumo zesifo sengqondo esixhalabisayo kunye ne-Alzheimer's kwiimodeli zemouse. I-J147 ithatha indlela eyahlukileyo ngokuthelekiswa nezinye iziyobisi zeNootropics kunye neAlzheimer's. I-J147 izama ukususa iidipozithi zobumba kwingqondo. Bekwaphawula ukuba i-J147 inamandla okujongana neminye imiba yokuguga yemvelo, hayi nje ilahleko yememori. Iyeza linganceda ukukhusela ukuvuza kwegazi kwii-microvessels, njengoko kubonisiwe kuvavanyo lweempuku kude kube ngoku. Iyeza laqala ukwenziwa ngonyaka ka-2011. Ukusukela oko, iimvavanyo zenziwe kwiimpuku kodwa asikaziboni naluphi na uvavanyo olubanzi olusekwe eluntwini. Nangona kunjalo, olunye uphando olupapashwe kulo nyaka uphelileyo luveza umfanekiso olungileyo wokuba i-J147 isebenza njani ngaphakathi kwengqondo yomntu. Ngokwephepha, eli chiza libophelela iprotheyini mitochondria. Iiseli zeMitochondria zihlala zinoxanduva lokuvelisa amandla. Intshukumo ye-J147 kubo iphucula ukwenziwa kweeseli. Olu ncedo lubaluleke kakhulu ekubuyiseni ilahleko yememori nasekuphuculeni impilo yengqondo iphela.
I-J147 powder (1146963-51-0) ividiyo
Ulwazi lweSiseko se-J147 powder
igama J147 powder
Igama leKhemikhali 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
Iintetho ezifanayo N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
I-Molecular Formula C18H17F3N2O2
Isisindo somzimba 350.341 g / mol
Indawo yokunyibilika 177-178 ° C
Kubonakala Imhlophe yomgubo ococekileyo omhlophe
Ubomi obulicla I-1.5 hrs kwi-plasma kunye ne-2.5 hrs kwingqondo
Umzimba Iinyibilika kwi-100 mM kwi-DMSO ukuya kwi-100 mM kwi-ethano
isicelo Isiyobisi esilingayo kunye neziphumo ezixeliweyo nxamnye nesifo se-Alzheimer kunye nokwaluphala kwiimodeli zemouse zokuguga okukhawulezayo.
Yintoni i-J147 powder?
Njengoko sele siphawulile apha ngasentla, i-J-147 powder sisiyobisi esilingayo. Ngamanye amagama, okwangoku ayifumaneki kumanani amakhulu kwimarike kwaye kusekho izinto ezininzi ezingekenziwa. I-J147 ibonwa njengonyango olunokwenzeka lwe-Alzheimer's kodwa inokuthengiswa njengesixhasi esijongene nokuguga.
I-J147 ibiphantsi kophuhliso ukusukela ngo-2011. Uphando malunga nokusebenza kwesiyobisi lusezantsi kakhulu. Kodwa siyayazi ukuba iyanceda ukuphinda yenze iiseli ezingqondweni zethu ngokubopha iiproteni zemochondria. Ukongeza, lonke uphando olwenziwe kwiziphumo ze-J147 lube kwimodeli zegundwane. Kude kubekho izilingo ezigcweleyo zabantu i-J147, kusekuninzi okunokubangela ukuba ungatyhileki. I-J147 synthesis isaqhubeka kwaye ichiza liyafumaneka kwi-Intanethi ukuze lithengwe.
Usebenza njani uJ147
Nangona uphando malunga nomsebenzi we-J147 njenge-Nootropics lusaza kuphuma kancinci, izazinzulu sele zikwazile ukubonisa ukuba zisebenza ngokuxhaphaza i-ATP, uhlobo lweproteyini efunyenwe kwi-mitochondria. Ngokutsho kwabaphandi, xa i-J147 yaziswa kwi-mitochondria, ii-neurons kwingqondo zazikhuselwe kwi-toxin ezihlala zihambelana nokuguga. Abaphandi bafumanise ukuba i-J147 trigger iphucula imveliso ye-ATP emzimbeni. Ichiza likwanokunceda ukuzinzisa i-mitochondria, into ebalulekileyo ekuchaseni ukuguga.
Ukubaluleka kwezi zenzo kubalulekile ngesizathu esinye. Kungenxa yokuba eyona nto ibangela uninzi lweAlzheimer, isifo sengqondo esixhalabisayo, kunye nezinye izifo zokugula kukuguga. Ukufumana indlela yokunciphisa okanye ukubuyisela umva iziphumo zokuguga kwingqondo kunokuba neziphumo ezihle kakhulu kunyango lwe-Alzheimer's. I-J147 ikwasetyenziselwa ukujolisa ekwakheni iproteni ye-beta-amyloid. Ukuqokelelwa okuphezulu kwale proteni kwizigulana zeAlzheimer kuye kwaxelwa kuphando lwangaphambili.
Kukho ubungqina obudibanisa esi sityholo sokuphazamiseka kwengqondo okuwohloka kubandakanya ne-Alzheimer's, isifo sikaParkinson nabanye. I-J147 Nootropic ijolise ekususeni ukuqokelelwa kwe-beta-amyloid plaque, yona inokunceda ukubuyisela umva okanye ukuthintela ukuqhubela phambili kweAlzheimer kunye neminye imiba yokuqonda. Eyona nto yenza ukuba i-J147 ibe sisiyobisi esithembisa kakhulu kukuba iyakwazi ukunyanga zonke iintlobo zengxaki yokuphazamiseka kwengqondo.
Okwangoku, uya kufuna unyango olwahlukileyo lokuphazamiseka kwengqondo okuhlukeneyo kwengqondo. Eyona nto ibalulekileyo, uya kufumana amayeza ka-Alzheimer's, Parkinson, nabanye. Kodwa i-J147 inokuba lonyango kuzo zonke ezi zifo. Uhlobo olunye lwamachiza anokunyanga ukuphazamiseka kwemithambo-luvo inokuba lutshintsho lomdlalo, kwaye i-J147 ikhangeleka ngathi ingayenza.
Izibonelelo kunye nokusetyenziswa kweJ147
I-J147 inezibonelelo ezahlukeneyo ezinokubakho. Ichiza okwangoku liphuhliswa njengonyango lwe-Alzheimer's kodwa libonelela nangezinye izibonelelo ezifanelekileyo.
UMeyi unokubuyisela umva ukuphazamiseka kweBongo
I-J147 ibonise isithembiso esininzi sokubuyisela umva impembelelo yokuphazamiseka kwengqondo kwi-neurodegenerative yengqondo njenge-Alzheimer's kunye nabanye. Kuvavanyo olwenziwe kwiimodeli zegundwane ukuza kuthi ga ngoku, ichiza libonise iimpembelelo ezintle ekujonganeni nale meko.
I-J147 isebenza ngokunceda iiseli ekubuyiselweni kwengqondo kwakhona, zizenze zincinci kwaye zisebenze ngakumbi kuneeseli ezindala. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho zilingo zomntu ezenziwe kwi-J147. Ngethemba, oko kuyakwenzeka kungekudala kodwa ichiza lisafumaneka ngokuthengiswa njengomgubo kubathengisi abakhethekileyo abakwi-Intanethi.
Ukuphucula isenzo seMitochondria kunye nokuPhila ixesha elide
I-J147 isebenza ngokubopha kwi-mitochondria, iiseli ezinoxanduva lokuvelisa amandla kwimizimba yethu. Isenzo se-J147 sinceda ukukhusela uxinzelelo lwe-oxidative kwiiseli ze-mitochondria, ezikhokelela ekusebenzeni ngcono kweseli kunye nokuphila ixesha elide.
I-J147 ikwanceda ukunciphisa i-metabolites eziyityhefu ezinokubangela ukugcwala kweseli, inkqubo leyo iiseli ezifa ngayo xa zidlula kakhulu. Oku kuvumela iiseli zakho ukuba zihlale zintsha kwaye zisempilweni ixesha elide. Ngapha koko, ezinye iindlela ezenziweyo kwizifundo zezilwanyana zabonisa ukuba ulawulo lwe-J147 kwiimpukane zeziqhamo luyolula ixesha labo lobomi nge-9.5 ukuya kwi-12.8%.
I-J147 ikwabonakalise isithembiso esikhulu phakathi kweemodeli zeemouse zokuphucula imemori. Eli chiza lide lanceda ukuguqula imeko ebukhali yokuqonda kwengqondo kwizifundo zovavanyo ezindala ngexesha lophando.
Abaphandi bakholelwa ukuba ezi ziphumo zinokuthi ziphindaphindwe kwizifundo zabantu. Kukho ubungqina obucebisa ukuba i-J147 inokuphononongwa njengonyango olunokwenzeka kwimemori yendawo.
Ikhusela i-Neurons kwaye inceda ukukhula kweBongo
I-J147 ikwanepropathi ye-neuroprotective ethintela isenzo se-oxidative ngaphakathi kweeseli. Oku kunceda ukukhusela i-neurons kumonakalo onokwenzeka. I-J147 inokuba sisizathu sokukhula kwengqondo. I-J147 inokuphucula imeko ye-synaptic yengqondo kwingqondo, ekhokelela ekukhuleni.
Uyisebenzisa njani i-J147
Ukusukela i-J147 iseyilo ichiza lokulingwa, akukho ndlela yokwazi ithamo elifanelekileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ayikho indlela yokwazi ukwenza i-J147. Ngaphandle koko, asibonanga naluphi na uvavanyo lweklinikhi lwe-J147 ebantwini.
Nangona kunjalo, ichiza sisixhasi esisebenza ngomlomo, oko kuthetha ukuba simele ukungeniswa emlonyeni. Kwiimvavanyo zovavanyo ze-J147 ezenziwe kwiimpuku, izifundo zovavanyo zanyangwa nge-J147 dosage ye-10 mgs ye-kilogram ubunzima bomzimba ngosuku. Oku akuthethi ukuba idosi esemgangathweni. Kungangcono ukubonisana nodokotela wakho phambi kokuqala ukusebenzisa i-J147.
I-J147 kunye neCurcumin
I-J147 ngenene yinguqu eguqulweyo ye-curcumin, imolekyulu efumaneka kwi-turmeric. I-Curcumin kudala idityaniswa nomsebenzi ophuculweyo wengqondo. Iimolekyuli zinoxanduva lokuphucula amanqanaba e-BDNF, into ethathwe kwingqondo yeNootropic enokubaluleka ekubuyiseni ukugula kwengqondo.
Uphando lwamva nje ngo-J147
Olunye lolona phando lwamva nje kwi-J147 lujonga iintshukumo zamachiza kwinqanaba leeselula. Iphepha elapapashwa ngo-2018 lamisela ukuba i-J147 isebenza ngokubopha kwiproteni kwi-mitochondria.
Intshukumo yenzelwa ingxelo yokuba inokubanamandla okuvuselela iiseli zobuchopho. Olunye uphando lwenziwe kwiimodeli zemouse malunga ne-J147 kunye namandla ayo okunyanga ukuphazamiseka kwengqondo kunye ne-Alzheimer's. Yayithembisa kakhulu.
I-J147 Powder Thenga
Isiphumo seCurcumin J147 iyafumaneka njenge powder kumthengisi okhethiweyo we-wisepowder kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuthatha unonophelo olongezelelekileyo ukuze ufumane imveliso elungileyo. I-Nootropics powder abathengisi esele bethengisa okwethutyana kufuneka babe ngaphezulu kuluhlu lwakho.
Jonga uphononongo lwabanye abasebenzisi kwakhona. Ufuna ukuthenga kubathengisi abanokuphononongwa okuninzi okuqinisekileyo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Ixabiso le-J147 liyahluka ukusuka kumthengisi ukuya kwelinye.
Isalathiso se-J147 (1146963-51-0)
"Uvavanyo olujolise kwiziyobisi lwesifo i-Alzheimer lubonisa iziphumo ezichasene nokwaluphala" (Ukhuphelo lweendaba). IZiko leSalk. 12 Novemba 2015. Ibuyiswe ngoNovemba 13, 2015.
UJoshua Goldberg et al. I-synopase ye-mitochondrial ye-ATP yinto ekujoliswe kuyo ekwabelwana ngayo ngamachiza okwaluphala kunye nesifo sengqondo esiyingozi. Iseli yokuguga, i-2018 DOI: 10.1111 / acel.12715
I-Oxiracetam Nootropics: Yonke into ekufuneka uyazi malunga nale Nootropic Kwintsapho yeRacetam
I-Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium (GM1) powder (Ingulube yengulube (37758- 47-7)